Mutungamiri weRENAMO VaAfonso Dhlakama Vanoshaya
Mutungamiri webato guru rinopikisa muMozambique, reRENAMO, VaAfonso Dhlakama, vanonzi vakashaya nezuro nechirwere chinofungidzirwa kuti ndechemoyo. Vange vachitarisirwa kupinda musarudzo gore rinouya neFRELIMO nemamwe mapato.
VaDhlakama, avo vanga vave nemakore makumi matanhatu nemashanu ekuberekwa, vanonzi vakashayira kumba kwavo kuGorongoza muMozambique makare.
Mufi akatungamira bato reRENAMO kwemakore makumi matatu nemapfumbamwe muhondo yebato iri yekurwisana nehurumende yeMozambique.
Hondo iyi yakaurayisa zviuru nezviuru zvevanhu munyika iyi, pamwe nemazana evanhu muZimbabwe, vamwe vachitiza misha yavo. Zimbabwe yakatumira mauto muMozambique kunochengetedza pombi yayo yemafuta ekufambisa dzimotokari yeFerruka. Izvi hazvina kufadza RENAMO iyo yakabva yati yainge yatanga hondo neZimbabwe muna 1986.
Zimbabwe yakabva yatumira mauto anodarika zviuru gumi kunobatsira hurumende yeMozambique. Vazhinji vevanhu vari kumuganhu kweMozambique neZimbabwe vaipota vachitizira muZimbabwe kana hondo yenyika iyi yanyanya kupisa.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika, VaFarai Maguwu, vanoti VaDhlakama munhu ainyatsonzwisisika.